साउदीमा ५ खर्ब डलरको लागतमा मेघा परियोजना सञ्चालन सुरु, नेपालीलाई रोजगारको अवसर बढ्ने ! - Thulo khabar
साउदीमा ५ खर्ब डलरको लागतमा मेघा परियोजना सञ्चालन सुरु, नेपालीलाई रोजगारको अवसर बढ्ने !
काठमाडौं : साउदी अरबमा नेपालीलाई रोजगारको अवसर बढ्ने सम्भावना भएको छ । साउदी अरबको पश्चिमी लाल सागर तटमा ५ खर्ब डलरको लागतमा मेघा परियोजना सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
नियोम शहरको मेगा परियोजनालाई लक्षित गरेर सो क्षेत्रमा करिब १० हजार कामदारहरूका लागि १० वटा शहर निर्माण गरिने भएको छ । कूल १ लाख कामदारका लागि बनाइने यो शहरहरूका टेण्डरहरू अब ६ महिनामै आह्वान गरिने साउदी गजेटले जनाएको छ । त्यसैले नेपालीलाई रोजगारको अवसर बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । आजको अर्थ बाट
साउदी शेखको ठूलो घोषणा, २०२२ देखी श्रमिकको तलब वृद्धि हुने ।
काठमाडौं : तेल उत्पादनको हिसाबले मात्रै नभएर अरब राष्ट्रको हिसाबले समेत शक्तिशाली रहेको साउदी अरबले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलबलाई पुन हेरफेर गर्न राजी भएको समाचार आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको कुरालाई बिश्वास मान्ने हो भने साउदी अरबले छिट्टै नै अप्रावासी कामदारको तलबमा वृद्धि गर्ने छ । जसमा दक्ष ,अर्ध दक्ष र अदक्ष कामदार संगै घरेलु कामदार समेत पर्ने छन् । साउदी अरबले कति प्रतिशत सम्म तलब वृद्धि गर्छ भन्ने अनुमान लगाउदै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार हाल खाई रहेको तलबमा १० प्रतिशत सम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ ।
जुन वृद्धि तलब सरकारी तथा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने अप्रावासी कामदारहरु सबैमा लागू हुने बताइएको छ ।प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले खाना र बस्नेबाहेक श्रमिकको न्यूनतम तलबमा हेरफेर गर्ने भएको बताइएको छ । यो घरेलु कामदारको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
तर साउदी अरबको सरकारले कहिले देखि र कति तलब वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा अझै खुलाएको छैन । साउदी राजकुमार बिबिएसले अमेरिका संग सम्बन्ध सुधरको कामलाई अगाडी बढाउदै अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुन बमोजिम साउदीलाई लागि रहेको अवस्थामा अप्रवासी कमदारको तलब वृद्धिको समाचार सत्य हुनेमा जानकार बताउछन् । बागमती अनलाइन